Voadika ny 13 Novambra 2018 6:43 GMT
Mihevitra i Tarek fa nanafangaro tanteraka ny fiteninay amin'ny teny nohafarana sy nodisoina ny tanora Toniziana. Manahy izy fa mihemotra tsikelikely ny vakoka ara-kolontsaina anay.
Sailor indray manoratra momba ireo profesora ao amin'ny INSAT (Ivon-toerana nasionaly momba ny siansa sy teknolojia ampiharina) ary araka ny heviny, ny fahafantarana hoe tsara ve izy ireo (profesora) sa tsia dia takon'ny tsy fahamarinana ataon'ny sasany amin'izy ireo amin'ny mpianatra, manome vahana ny sasany sy manimba ny hafa noho ny hafa antony samihafa tahaka ny maha-lahy sy vavy, ny fipetrahana amin'ny tanàna iray, … sns
Mochekes mitaraina momba ny toe-javatra iainan'ny injeniera teknolojiam-baovao sy ny programera ao Tonizia, sy ny karaman'izy ireo tsy ara-drariny sy tsy mifanaraka amin'ny habetsaky ny asa atao, ny fomba fitondrana azy ireo toy ny mpiasa ambany na andevo mihitsy aza, sy ny tsy mbola fivoaran'ny orinasa … sns.
Navoaka tao amin'ny gazetiboky Toniziana Réalités ny lahatsoratra iray momba ny fifanambadian'ny mitovy fananahana ao Tonizia, sy ny fomba fihevitry ny fiarahamonina sy ny lalàna ary nalain'ireo bilaogera marobe tahaka an'i Houssein, Hannibal sy K-pax, izay mieritreritra fa ezaka feno fahasahiana sy maherifo hitondrana ny olana izany.
Iskander manoratra momba ny resadresaka nifanaovany tamin'ny olon-dehibe sasany teo amin'ny taranaky ny rainy sy ny raibeny, izay niresaka momba ny fiainana tany Tonizia talohan'ny fahaleovantenany sy ny fomba nahatonga azy ireo ho manembona ny lasa sy nihevitra fa fotoana tsara ara-tsosialy kokoa izany ary nisy ny fifangaroan'ny foko lehibe.
Adib nanao fikarohana sasany momba ny tantara iray hafahafa izay navoaka tamin'ny gazety Toniziana miresaka bibilava Anaconda milanja 2 taonina, mirefy 8 metatra hita tao amin'ny sisintany Toniziana-Libyana tamin'ny volana novambra, ary nahita fa tsaho (hoax) izany, satria ny sary hita dia ireo “python” izay tratra tany Afrika Atsimo vao haingana. Manakiana ny mpanoratra ny lahatsoratra izy noho ny famoahana tantara diso toy izany.